Progressive Voice Myanmar » Media Advisory – Human Rights in Myanmar: Towards the Establishment ofaLegitimate and Independent National Human Rights Institution
Home Resources Press Releases Media Advisory – Human Rights in Myanmar: Towards the Establishm...
Press Release 271 Views
Media Advisory – Human Rights in Myanmar: Towards the Establishment ofaLegitimate and Independent National Human Rights Institution
December 9th, 2021 • Author: Working Group on MNHRC Reform and the Asian NGO Network on National Human Rights Institutions (ANNI) •3minute read
Towards the Establishment ofaLegitimate and Independent National Human Rights Institution
Online discussion on reconstituting the Myanmar National Human Rights Commission: Myanmar civil society proposesanew Union Human Rights Commission Law
The Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC) has long suffered fromatrust deficit, stemming from its enabling law which fell short of meeting internationally recognized standards of howaNational Human Rights Institution should function, otherwise known as the Paris Principles. The attempted military coup of 1 February has brought the shortcomings and failures of the MNHRC sharply into focus as it failed to respond to the Myanmar junta’s grave human rights violations, let alone condemn the attempted coup. As the Myanmar military intensifies its acts of terror across Myanmar, there is an urgent need for the legitimate government of Myanmar to abolish the current MNHRC that is still operating under the control of the junta and establishanew independent National Human Rights Institution that will work to protect and promote human rights.
The CSO Working Group on MNHRC Reform has submittedaproposed draft ofanew Union Human Rights Commission (UHRC) Law to the National Unity Consultative Council (NUCC), the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) and the National Unity Government (NUG). This is the first law ever to be proposed by civil society organizations to the legitimate government of Myanmar since the attempted coup. Speakers will discuss the current human rights situation on the ground in Myanmar and the significance of the proposed law, as well asaway forward to establishanew independent commission that is fully in compliance with the Paris Principles.
The Working Group on MNHRC Reform and the Asian NGO Network on National Human Rights Institutions (ANNI) will also launchareport “You’re the Devil in Disguise: the Duplicitous, Obsolete MNHRC”, highlighting how the endemic flaws in the structural integrity of the MNHRC’s legal framework led to its eventual capitulation in the aftermath of 1 February, 2021 attempted coup by the illegal Myanmar military junta.
When: Tuesday 14 December 2021, 10:00 – 11:30 am Yangon Time (GMT+6:30)
Daw Khin Ohmar, Progressive Voice
Ma Thinzar Shunlei Yi, Action Committee for Democracy Development
Naw Htoo Htoo, Karen Human Rights Group
Ko Thet Swe Win, Synergy – Social Harmony Organization
Ko Ye Hein Aung, Myanmar Cultural Research Society
For more information, please contact: reformmnhrc@gmail.com
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ
တရားဝင်မှုရှိပြီး လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းသော နိုင်ငံအဆင့်လူ့အခွင့်အရေးဌာနတစ်ခု တည်ထောင်ခြင်းဆီသို့
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ပတ်သက်သော အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲ – မြန်မာအရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ ပြည်ထောင်စုလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေ အသစ်တစ်ရပ်ကို အဆိုပြုတင်သွင်းခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် (MNHRC) သည် အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးဌာနများ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် နိုင်ငံတကာအဆင့် အသိအမှတ်ပြု စံချိန်းစံနှုန်းဖြစ်သော ပါရီအခြေခံမူများနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိခြင်းကြောင့် ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့ခြင်းကို ခံနေရသည်မှာ ကြာမြင့်နေပြီ ဖြစ်သည်။ MNHRC သည် စစ်အုပ်စု၏ အာဏာသိမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုကို ရှုတ်ချရန် မဆိုထားနှင့်၊ စစ်အုပ်စု၏ ဆိုးရွားကျယ်ပြန့်သော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို တုံ့ပြန်ရန်ပင် ပျက်ကွက်နေသည့်အတွက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှုက MNHRC ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိမှု နှင့် ကျရှုံးမှုများကို ပို၍ပင် သိသာထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်စေသည်။ မြန်မာစစ်အုပ်စုမှ ၎င်း၏ အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရပ်များကို နိုင်ငံအနှံ့ တိုးမြင့်လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အစိုးရမှ စစ်အုပ်စုလက်အောက် လည်ပတ်နေသည့် လက်ရှိ MNHRC ကို ဖျက်သိမ်းပြီး ပြည်သူလူထု၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ် မြှင့်တင်ပေးသည့် လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းသော နိုင်ငံအဆင့် လူ့အခွင့်အရေးဌာန အသစ်တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းရန် အလွန်ပင် အရေးကြီးနေပြီ ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများ အလုပ်အဖွဲ့ (အလုပ်အဖွဲ့)မှ ပြည်‌ထောင်စုလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် (Union Human Rights Commission – UHRC) ဥပဒေမူကြမ်းကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (NUCC)၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်‌တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) နှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) တို့ထံ ပေးပို့တင်သွင်းထားပါသည်။ ယင်းဥပဒေသည် စစ်အုပ်စု၏ အာဏာသိမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှုနောက်ပိုင်း အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ တရားဝင်အစိုးရထံသို့ ပေးပို့တင်သွင်းသည့် ပထမဆုံးသော ဥပဒေတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ယခုပွဲတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော မြေပြင်လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများ၊ အဆိုပြုတင်သွင်းထားသော ဥပဒေ၏ အရေးပါမှုနှင့်အတူ ပါရီအခြေခံမူများနှင့် အပြည့်အ၀ကိုက်ညီသော လွတ်လပ်အမှီခိုကင်းသည့် ကော်မရှင်အသစ်တစ်ခု ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် အလုပ်အဖွဲ့ နှင့် အာရှဒေသ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးဌာနများဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ကွန်ရက် (Asian NGO Network on National Human Rights Institutions – ANNI) တို့မှ “You’re the Devil in Disguise: the Duplicitous, Obsolete MNHRC” ဟုအမည်ရသော အစီရင်ခံစာကိုလည်း မိတ်ဆက်ထုတ်ပြန်သွားပါမည်။ ထိုအစီရင်ခံစာတွင် MNHRC ၏ တရားဝင် မူဘောင်အတွင်းရှိ အဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များ စုပုံနေခြင်းက ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း မြန်မာစစ်အုပ်စု၏ တရားမဝင် အာဏာသိမ်းရေး ကြိုးပမ်မှုအောက် အညံ့ခံလိုက်သည့်ဖြစ်ရပ်ကို ဦးတည်သွားစေခဲ့သော အခြေအနေများကို မီးမောင်းထိုး ဖော်ပြထားသည်။
နေ့ရက် ။ ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက် (အင်္ဂါနေ့)
အချိန် ။ ။ နံနက် ၁၀း၀၀ – ၁၁း၃၀ နာရီအထိ (မြန်မာစံတော်ချိန် GMT +6:30)
နာမည်စာရင်း ပေးသွင်းရန် – https://zoom.us/webinar/register/WN_wklJvooJTh-WXDY3lTb1fA
ကိုရဲဟိန်းအောင်၊ Myanmar Cultural Research Society
ထပ်မံသိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန် – reformmnhrc@gmail.com